BF ဆိုတာဘာလဲ? ~ ITmanHOME
19:29 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြောတယ် "ငါက နင့်ရဲ့ BF ပါ"တဲ့။
ကောင်လေးရဲ့အပြောကို နားမလည်တဲ့ ကောင်မလေးက အပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့မေးတယ်။
ကောင်လေးက ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ "BF ဆိုတာ best friendပါ" လို့ပြောတယ်။
အဲဒီနောက် အရွယ်ရောက်လာကြတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်။
အဲဒီမှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကိုထပ်ပြောတယ် ""ငါက နင့်ရဲ့ BF ပါ"တဲ့။
ကောင်မလေးက မခို့တရိုနဲ့ မေးတယ်။
ကောင်လေးက ကောင်မလေးမေးစေ့ကို ကြင်ကြင်နာနာကိုင်ပြီး ဖြေတယ်။
"BF ဆိုတာ boy friendပါ" တဲ့။
အဲဒီနောက် နှစ်အတန်ငယ်အကြာမှာ သူတို့လက်ထပ်ကြတယ်။ ချစ်စရာ ကလေးလေးမွေးခဲ့တယ်။
အဲဒီမှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက ဇနီးကို ပြုံးပြုံးလေးပြောပြန်တယ် "ငါက နင့်ရဲ့ BF ပါ"တဲ့။
ဇနီးက ပန်းကန်တွေသိမ်းနေရာက ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ပြန်မေးတယ် "BF ဆိုတာဘာလဲ?"
ယောက်ျားက ကလေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့အသံနဲ့ ပြောတယ်။
"BF ဆိုတာ baby's fatherပါ" တဲ့။
အဲဒီနောက် သူတို့တဖြေးဖြေး အိုမင်းခဲ့ကြတယ်။
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး အိမ်ရှေ့ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ညနေဆည်းဆာအလှကို ရှုစားနေခဲ့တယ်။
အဲဒီမှာ အဘိုးအိုက အဘွားအိုကို "အဘွားကြီး.. အဘွားကြီး ငါက နင့်ရဲ့BFပါ" လို့ပြောတယ်။
မျက်နှာတစ်ခုလုံးပေါ် အရစ်အကြောင်းတွေပေါ်တဲ့အထိ အဘွားအိုပြုံးပြီး ပြန်မေးတယ်။
"BF ဆိုတာ ဘာလဲ အဘိုးကြီးရယ်...."
အဘိုးအိုက ကောင်းကင်ထက်က ညနေဆည်းဆာအလှကို မော့ကြည့်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်တဲ့အသံနဲ့
"BF ဆိုတာ Be forever ပါအဘွားကြီးရယ်..." တဲ့.....................